Afrika Mainty · Septambra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Septambra, 2011
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Septambra, 2011
Frantsa13 Septambra 2011
Benin08 Septambra 2011
Nisantatra ny lalana i Ellen Johnson-Sirleaf tamin'ny taona 2006, raha voafidy ho Filohan'i Liberia ary nanjary vehivavy Afrikanina voalohany tafakatra amin'ny toerana ambony indrindra. Nanomboka hatreo, dia maro ireo vehivavy Afrikanina nanapa-kevitra hirotsaka hofidiana filoham-pirenena, vao haingana indrindra tao Benin, Kamerona, Ganà, Ginea, Repoblika Demokratika Kongo ary Nizera. Samy nanana ny...
Oganda07 Septambra 2011
Ny ala Mabira dia hita ao afovoan'i Oganda akaikin'i Kampala renivohitra. Iray amin'ireo ala voajanahary vitsivitsy izay sisa tavela taorian'ny taona maro nahapotika hektara maromaro. Niady nanao hetsika fanoherana ny governemanta ireo Ogande mba tsy hamarotana ny tany aminà orinasa mpamokatra siramamy.
Angola06 Septambra 2011
Zimbaboe06 Septambra 2011
Nizeria04 Septambra 2011
Ngozi Okonjo-Iweala (NOI), Minisitry ny Fitantanam-bola vaovao sy Minisitra Misahana ny Toe-karena. Vao haingana kely i NOI no tale jeneralin'i Banky Iraisam-pirenena. Raha vao nanomboka nikotaba ny haino aman-jery mikasika an'io fanendrena azy io, dia tsy nitsahatra niresaka momba an'io vehivavy manam-pahefana ambony indrindra tao amin'ny kabinetran'ny filoha Goodluck Jonathan...
Tselatra · Madagasikara03 Septambra 2011
Repoblikan'i Afrika Afovoany01 Septambra 2011